संघियतालाइ बदनाम गर्दै स्थानीय तह, भ्रष्टाचारमा चुर्लुम्म डुबेको अख्तियारको ठहर – Sanghiya Online
संघियतालाइ बदनाम गर्दै स्थानीय तह, भ्रष्टाचारमा चुर्लुम्म डुबेको अख्तियारको ठहर
काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले स्थानीय तह भ्रष्टाचारमा डुबेको ठहर गरेको छ। अख्तियारमा यतिबेला स्थानीय तहमा भएका अनियमिततासम्बन्धी उजुरीको चाङ लागेको छ। योजना कार्यान्वयन तथा व्यवस्थापन, सेवा तथा खरिद, कर्मचारी व्यवस्थापन, सामाजिक सुरक्षा भत्ता तथा सेवा वितरण, सार्वजनिक जग्गा सिफारिस, शिक्षा व्यवस्थापन लगायतका उजुरीमा छानबिन गर्दा व्यापक भ्रष्टाचार पाइएको आयोगका प्रवक्ता एवं सहसचिव प्रदीपकुमार कोइरालाले जानकारी दिनु भएको छ ।
वडाध्यक्षका अधिकार वडा सदस्यले प्रयोग गर्ने, प्रमुख-अध्यक्षका अधिकार उपप्रमुख÷उपाध्यक्षले प्रयोग गर्ने र कार्यपालिकाको अधिकार अध्यक्ष वा प्रमुखले प्रयोग गरेको पाइएको छ। कानुन नबनाइ मौखिक आदेशका भरमा काम गरेकोसमेत भेटिएको छ। राजनीतिक तथा प्रशासनिक पहुँचका आधारमा योजना छनोट गरेको पाइएको अख्तियारले जनाएको छ। राजनीतिक प्रकृतिका संस्थामा बजेट विनियोजन गरेको पाइएको छ। विकास निर्माणको एउटै कामलाई दोहोरो देखाइ झुटा बिल–भर्पाइ एवं विवरण बनाएर भुक्तानी लिने गरेको पाइएको छ।
आदिवासी जनजाति महासंघले चैत १२ गते आयोगको प्रतिवेदन जलाउने, महासंघको विभाग र प्रदेशहरूको इन्चार्ज र प्रमुखहरू पनि तोकियो
३ नं. प्रदेशको नाम नेवा-तामसालिङ हुने प्रस्तावक र समर्थकहरु दावी, (बिज्ञप्ति सहित)
धरानको मतगणना सोमबार जारी, नेकपा कि कांग्रेस अगाडी ? यस्तो छ अहिलेको ताजा परिणाम